DAAWO: “Baddeena hadal iyo erayo diblumaasiyada ka maran laguma qaadan karro” Xildhibaan Farah Cabdulqaadir
MUQDISHO(P-TIMES) – Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo katirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa wareysi uu siiyey warbaahinta maxaliga ah ee Soomaaliya wuxuu ka jawaabay su`aalo kuwajahnaa arrimaha dacwadda badda ee u dhaxeeya Kenya oo doonaysa in ay qaadato baddeena iyo Soomaaliya.
Xildhibaan Faarax ayaa ku sifeeyey hadaladii kasoo yeeray Siyaasiin iyo xildhibaano katirsan dawladda Kenya in ay ahaayeen hadalo deelqaaf siyaasaded ah, isla markaasna ay yihiin kuwa aan marnaba badda Soomaaliyeed lagula wareegi karin.
“Hadalada kasoo yeeraya siyaasiinta reer Kenya waa hadalo ka maran Luuqada xadaariga ah ee lagu wada hadlo, mana aha arrinta Baddeenu mid maxkamadda meel aan aheyn looga wada hadlayo ama warkedu ka furan yahay” ayuu yiri Xildhibaan Faarax.
Xildhibaanka ayaa sheegay in ay Soomaaliya dacwadeeda u marayso habka caalamiga ah ee ay soo dhajisay Maxkamadda Cadaaladda Aduunka oo ay ku qanacsan yihiin sida ay wax ku socdaan.
Dawladda Soomaaliya ayuu sheegay in ay talaabo wanaagsan horey ugu dhaqaajisay wax kasta oo la xariira arrimaha dacwadda Badda oo ay horey dawladdii Xassan Sheekh u bilowday in ay geyso Maxkamadda Cadaaladda Aduunka.
Xildhibaanku wuxuu kaloo cadeeyey in cid kasta oo isku dayda in ay hadalo maran oo siyaasadeed ku weerarto Soomaaliya ay iyadu uun is dilayso ee aysan marnaba Kenya heli doonin xaq aysan laheyn, Soomaalidana looga baahan yahay in ay taas fahmaan.